Ogaden News Agency (ONA) – Daalibaan & Daacish oo Dagaalo Ku Dhexmaray Afqaanistaan.
Daalibaan & Daacish oo Dagaalo Ku Dhexmaray Afqaanistaan.
Dagaalo xooggan oo dhawr bari socday ayaa ku dhex maray kooxaha Daalibaan iyo Daacish ee dalka Afghanistan, iyagoo lagu soo waramayo in labada dhinacba ay khasaare xooggan gaadhsiiyeen.
Dagaalkan ayaa horaantii toddobaadkan ka qarxay Dagmada Khogyani ee Gobolka Nangarhar, kadib markii dagaalyahanada Daacish ay weerar ku qaadeen saldhig ay haysteen Daalibaanka. Isku dhacyadan ayaa boqolaal qof oo shacab ah ka barakiciyey guryahooda, si ay uga fogaadaan in ay haleesho rasaasta ay isweydaarsanayaan labada kooxood.
Afhayeen ku sugan Gobolka oo u hadlay Ciidanka Afghanistan ayaa saxaafada u xaqiijiyay in guul ay Daacish ka gaadheen dagaalkan ay ku dhiiri galisay in ay weerar kale ku qaadaan fadhiisimo ay Daalibaan ku leeyihiin Dagmada Alingar ee Gobolka Laghman, halkaasi oo isku dhac xooggan uu ka dhacay.
Saraakiil ku sugan Gobolka ayaa sheegay in Daalibaan ay hadda isku dayayaan in ay gurmad xooggan geeyaan Gobolka Laghman, halka Daacish ayagana ay dagaalyahanno ka keenayaan Gobollada ay ku xoogan yiiin ee Nangarhar iyo Kunar.